Top 5 Software ọcha Your Mac
Mgbe eji gị Mac ruo ogologo oge, ị ga-ahụ na nchekwa dị obere na nta, n'agbanyeghị na ị na-ihichapụ ụfọdụ na-abaghị uru faịlụ onwe elu ohere. Nke bụ eziokwu bụ na gị na-ehichapụ faịlụ ka na-adị na gị Mac ma invisiable na e nwere ọtụtụ caches. Ọ bụrụ na ị chọrọ ọcha gị Mac ọzọ rụọ ọrụ nke ọma, ị kwesịrị ị na-agbalị ọkachamara Mac ọcha software. N'okpuru ebe a bụ n'elu 5 kasị ewu ewu na ngwa ị nwere ike na-agbalị. Isiokwu a na-ekpuchi 2 akụkụ. Ego onye na ị nwere mmasị na:
Part 1. Top 5 Software ọcha Mac
Part 2. Ị ga-amarakwa Tupu nhicha Your Mac
M hụrụ nke a Mac ihicha ngwá ọrụ a ibu ngwa-ngwa ngwaahịa na ụtọ nhicha ma gụọ 2.3 GB na dị nnọọ 15 sekọnd. Ọ bụ ihe ịtụnanya m na m mere ihe a mgbagwoju ọrụ nke nhicha na dị nnọọ 15 sekọnd.
Mackeeper bụkwa ihe ọma ihicha ngwá ọrụ na-ka nwetara ọsọ na-ezu okè. Ya ngwa ngwa ewepu pụọ niile ahịhịa na-enye gị a ọhụrụ PC. M ji ya ọcha m PC na o were ụfọdụ 10-20 sekọnd wepụ niile cache faịlụ na m họrọ.
Ọ bụ ezie na ọ na-apụghị mpi na abụọ na-eduga ihicha ngwaahịa ma ka ọ pụrụ ime gị arụ ọrụ n'ime a nkeji.
MacCleanse bụ ezigbo software na a ike ọsọ-ewepụ ihe niile na trashes dị na gị Mac. Na-ewe ọ dịghị ihe karịrị a nkeji wepụ data ruo 2 GB.
Mmanya http://www.maintain.se/cocktail/ $ 19.00
Dị ka ọ na-arụ a mara mma dị mfe interface, ọsọ nke nhicha mkpari faịlụ dị nnọọ elu. Ọ nwere ike na iti ọbụna ọ dịghị. 4 na 3 na-agba. M ji ya na-kpochara m pc n'ime nanị sekọnd 30.
E nwere otutu online na Adobe-na-ngwa agha na-echekwa-enye gị ohere ahia gị ochie iPhone. Otú ọ dị, tupu ị na-ere gị eji iPhone, ị ga-eme obere nnyocha banyere site na nke na-echekwa na ị na-hà ga-kasị, nke ụlọ ahịa na-eme ka ọ dị mfe n'ihi na ị na-ere ya, na nke ugwo usoro ị ga-amasị-enweta. N'okpuru ebe a bụ top 10 echekwa ị pụrụ iwere dị ka akwụkwọ.
CleanMyMac2 bụ ụwa kasị mmasị MAC ihicha ngwá ọrụ nke na-enyere gị ọcha gị Mac PC na sekọnd ma mee ka ọ ngwa ngwa dị ka a rọketi. All nnukwu software ndị nlebanye anya dị ka CNET, Macworld, Tucows na ndị ọzọ si n'aka a Mac ihicha ngwá ọrụ dị ka a zuru okè ngwa n'ihi na nhicha niile na-abaghị uru faịlụ na-adị n'elu PC.
Full PC iṅomi: enyocha kwa gị Mac site na otu akuku ọzọ okodorode niile ide ebe nchekwa corridors si diski ike mbanye na-eme PC ọsọ dị ka a rọketi!
Nchekwa Mac ọcha: CleanMyMac2 bụ ọgụgụ isi na ya na-arụ ọrụ. Naanị deletes ihe na-abaghị uru ma doo ihe bụ ukwuu bara uru gị. Ọ pụtara na ọ dịghị ihe mkpari mberede nke ịlụ wepụrụ gị niile foto.
App Uninstaller: zuru okè ngwa uninstaller-enyere gị iji wepu ọbụna ibu size ngwa ngwa ngwa.
Scheduler: Ị mgbe echefu ọcha gị Mac? Nke a nwere ọgụgụ isi scheduler nke CleanMyMac2 ga-gị PC na n'ọnụ top ọnọdụ site na iwepu na-abaghị uru faịlụ na oge.
iPhoto optimizer: Ọ dịghị ihe ọzọ oyiri photos. The pụrụ iche iPhoto optimizer atụmatụ ewepu niile oyiri faịlụ na-eme gị PC data pụrụ iche na ọhụrụ.
Nnukwu faịlụ nyocha: N'agbanyeghị otú nnukwu a faịlụ ya, ọ ntabi-enyocha kwa faịlụ niile na ewepu ha na sekọnd ole na ole.
Nzọụkwụ iji CleanMyMac2
Nzọụkwụ 1. Launch na ngwa ma nwere jụụ anya na interface.
Nzọụkwụ 2.-aga n'aka ekpe akuku na ego / uncheck caches, faịlụ, rifọrọ erifọ na ndị ọzọ na nhọrọ maka scanning.
Nzọụkwụ 3. Ozugbo kpebiri ihe na-iṅomi ma ego, na-aga ala aka ekpe ala na see na-egbuke egbuke green Doppler bọtịnụ.
Nzọụkwụ 4. Ozugbo scanning completes, ị ga-ọzọ nyere na otu nhọrọ ego / Uncheck ngalaba na ị chọrọ iji wepu, kpebie n'ebe ahụ ma na n'ihu na-eti na-egbuke egbuke-acha anụnụ anụnụ button aha dị ka dị ọcha.
Nzọụkwụ 5. N'ime sekọnd ole na ole, ị ga-ahụ pụta cleanup usoro.
Mackkeeper e ọdịda 5 kpakpando ọtụtụ ugboro site na nnukwu ndị nlebanye anya dị ka softonic, CNET, Brothersoft wdg 16 ngwa kacha ngwugwu nke Mackeeper bụ ibu mmezi ngwugwu maka PC gị. Ọ bụghị naanị na ọ ọcha gị PC ma na-enyere ya aka ịnọgide na-ya ịrụ ọrụ na-agba.
Nzi Mac nzacha na mkpocha: Safely ma jiri nwayọọ ọcha niile na-abaghị uru faịlụ dị ka ndekọ, cache, ọnụọgụ abụọ faịlụ na asụsụ ngwugwu mgbe na-eme ka PC agba ngwa ngwa.
Disk ojiji: A mara mma map nke disk-ese na iche iche na agba na-egosi ihe faịlụ nwere weghaara ihe nke nchekwa. Ọ na-enyere gị aka ịmata nke na-abaghị uru ihe na-akada gị disk ohere na a ga-ewepụ otu mgbe.
Oyiri locater:-enyere gị aka ịchọta niile oyiri faịlụ, foto dị na ike gị diski na ewepu ha n'otu ntabi anya.
File locater:-enyere ịchọta furu efu faịlụ ọbụna ma ọ bụrụ i chefuola aha ha. Mee gị onwe gị search ibiere na ịmalite ịgagharị gị furu efu data.
Arụsi ọrụ ike Shredder: shredding mma na-eme nke a Mac cleanup irè karị site na iwepu achọghị faịlụ na-ekpocha ọzọ ohere maka a dị ọcha PC ojiji.
Maara ihe uninstaller: Ị nwere ike iwepụ niile na-abaghị uru ngwa ma ọ bụ omume n'agbanyeghị otú obere ma ọ bụ nnukwu na size ha bụ.
Nzọụkwụ iji MacKeeper
Nzọụkwụ 1. Wụnye Mackeeper ngwa na ẹkedori ya otu ugboro nwụnye usoro bụ n'elu.
Nzọụkwụ 2. Gaa na elu akaekpe nke interface ma na-achọta "otu click Doppler" button. Kụrụ na bọtịnụ na a usoro nke ịgụ isiokwu ga-amalite.
Nzọụkwụ 3. Ozugbo usoro bụ zuru ezu, ojiji, igodo nyere na ala nke interface "ngwa ngwa anya" anya na faịlụ nke dị mma iji wepụ na nke na-adịghị.
Nzọụkwụ 4. Jiri "ego / uncheck" igodo n'akụkụ "ngwa ngwa anya" isi aka ikpebi ihe na-na ihe iji wepụ.
Nzọụkwụ 5. Ozugbo enyocha, see-ewepụ button nyere n'okpuru iji wepụ ndị niile na-achọghị faịlụ.
A zuru ezu MAC mmezi ngwugwu kwesịrị sọọ mpi na n'elu abụọ ụlọ ọrụ ndú. Na-enye gị kacha arụmọrụ mgbe na-eme ka ihe nile dị mfe n'ihi na ị na-aka. Mfe ma nnọọ ala interface.
History Archives: ewepu niile ndị ejibeghi akụkọ ihe mere eme faịlụ nghọta ihe karịrị gị disk ohere.
Ejibeghi asụsụ: ewepu niile ejibeghi asụsụ faịlụ si dị iche iche ngwa mgbe idebe ha arụmọrụ emebibeghị.
Ahịhịa & downloads: Dị Ọcha niile ahịhịa nwere ike bụ n'otu ntabi na-adịgide adịgide mgbe idebe mkpa faịlụ na-echere.
Ngwa si ​​rifọrọ erifọ remover: Mgbe ụfọdụ apps ahapụ ha faịlụ na PC mgbe uninstalled. DetoxMyMac ewepu niile ndị faịlụ na boosts ọsọ nke PC.
Eliminates cache faịlụ: Zaa niile cache faịlụ na ewepu ha n'otu ntabi iji hụ na ibu ngwa-ngwa ọsọ nke gị PC.
Ewepu ndekọ, Reports & ọzọ stof: eme ka ndị ọzọ free ohere site na iwepu niile na-achọghị ndekọ na ndị ọzọ na stof.
Nzọụkwụ iji DetoxMyMac
Nzọụkwụ 1. Wụnye ngwa na-agba ya.
Nzọụkwụ 2. Go maka ngwa ngwa Doppler nke gị Mac ịlele ihe dị na PC gị na-eme ka ọ akwụsịlata.
Nzọụkwụ 3. Ozugbo Doppler dị n'elu, họrọ edemede site n'aka ekpe mmanya ikpebi ihe faịlụ na ị chọrọ iji wepụ.
Nzọụkwụ 4. See ewepụ button wepụ gị chọrọ stof.
Nzọụkwụ 5. Enwe a ibu ngwa-ngwa na kpochara Mac na sekọnd.
MacCleanse bụ ihe ọzọ na-eduga Mac nhicha ngwá ọrụ nke ewepu niile na-achọghị faịlụ, akụkọ, ndekọ na ndị ọzọ na-abaghị uru faịlụ mee ka gị na Mac na-agba ọsọ dị ka a ibu igwe. Dị na ala price ka tụnyere ndị ụlọ ọrụ ahụ na-eduga na ngwaahịa ma nwere ike ọcha gị PC rụọ ọrụ nke ọma na-eme ka ọ ìhè dara nha igwe.
Cache Remover: Ozugbo ewepu niile gị cache faịlụ mee ka gị na Mac-eche ligher.
History nchicha: erases online akụkọ ihe mere eme nke gị Mac iji chebe gị online ọnụnọ na-enyere gị aka onwe gị PC si ejibeghi akụkọ ihe mere eme faịlụ.
Kuki Cleaner: Dị Ọcha niile kuki ndị na-enweghị ojiji maka na ị ma akada a nnukwu n'ógbè gị disk.
Secure & Fast ịgụ isiokwu na mwepụ: enyocha kwa na ewepu niile na-achọghị na-abaghị uru faịlụ na sekọnd ole na ole.
Interactive Ma Mgbagwoju Interface: N'ozuzu a Mac cleanser a lekwasịrị anya na-echebe online ọnụnọ nke ọrụ na ya dịkwa n'ebe ụmụ mmadụ mara mma mma kenkwukorita interface ma n'ihi newbie si ọ bụ a bit tricky ahu nagide.
Nzọụkwụ iji MacCleanse
Nzọụkwụ 1. Wụnye ngwa na ẹkedori ya.
Nzọụkwụ 2. Malite a "ngwa ngwa iṅomi" ịhụ ihe faịlụ, kuki, rifọrọ erifọ mkpa ga-ewepụ.
Nzọụkwụ 3. Na results, ego na ihe na ị chọrọ iji wepụ na iti wepụ bọtịnụ.
Nzọụkwụ 4. I nwekwara ike iji uninstaller iwepụ na ejibeghi apps / omume.
Mmanya ọ bụ ezie na e gosiri dị ka ọ dịghị. na m onye ntule ule ma ka ọ dị nnọọ mma karịa nza nke ọzọ Mac ihicha ngwaọrụ dị online. Ọ na-adịghị na-enye mgbanwe na arụmọrụ hà n'elu tụlere ngwaọrụ ma ka ọ bụ nnọọ kemfe ngwá ọrụ iji na-enwe Mac PC n'ihi na ala price. Ọ na-agụnye fọrọ nke nta niile ụdị ihicha ụlọ ọrụ nke na-depụtara n'okpuru:
Plain na mfe iji interface: N'agbanyeghị otú stuffed gị PC bụ, mmanya dị mfe & fun iji interface-enyere gị aka kpochapụ ndị niile na-achọghị faịlụ ke otu laa.
Idozi & ebuli:-enyere gị aka ịrụzi gị Mac PC site n'ịrụ a disk ọcha ule mbo mbuli ọsọ nke Mac.
Hichaa ejibeghi Files:-enye gị ohere-ewepụ ihe niile ejibeghi faịlụ mgbe igbochi gị bara uru faịlụ.
Ewepu ndekọ, cache: Ọ dịghị ihe ọzọ cache stuffed PC. Ọ na-ewepu niile cache na ndekọ na ndị na-enweghị eji eme ka n'aka gị PC bụ adịghị n'elu anyịgbu.
Nzọụkwụ na-eji mmanya
Nzọụkwụ 1. Wụnye ngwa na ẹkedori ya ozugbo.
Nzọụkwụ 2. Ị ga-abịa gafee a mara mma dị mfe interface egosi dị iche iche na taabụ na n'elu nke ngwa.
Nzọụkwụ 3. Pịgharịa site dị iche iche na taabụ dị ka diski, faịlụ na ndị ọzọ ị ga-ahụ ihe ọ na-enye gị.
Nzọụkwụ 4. Files taabụ ga-enyere gị ọcha na-achọghị faịlụ site na gị Mac.
Chọpụta, site na iji ihe ọ bụla nke n'elu kwuru banyere software, gị Mac ga-ebughibu na ọcha. Otú ọ dị, tupu nhicha gị Mac, ị kwesịrị ị na hụ na e nweghị ihe dị mkpa data na anọwo na-ehichapụ na kọmputa gị. Ma, site na-eme ihicha, ha niile ga-ruo mgbe ebighị ebi. Mgbe ahụ, ị pụrụ ikwu otú m nwere ike lelee ma e nwere data m mkpa ma ọ bụ. Ị nwere ike iji Wondershare Data Recovery for Mac ike iṅomi gị na kọmputa. All data ọ chọta ga-egosipụta, na-ekwe gị previu, ka foto, videos, akwụkwọ, ọdịyo faịlụ, wdg N'okpuru ebe bụ 3 mfe nzọụkwụ ka iṅomi data na kọmputa gị na Wondershare Data Recovery for Mac.
Download ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery for Mac inwe a na-agbalị!
Ahọrọ "Echefuola File Iweghachite" mode. Ọ na-ekwe ka ị chọta faịlụ ehichapụ site Wụk + ihichapụ ma ọ bụ bupụrụ n'ebemkpofuozi. Ọ bụrụ na ị na-eche gị mkpa a miri Doppler, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ ndị ọzọ nhọrọ na isi window.
Na ị na-enwe ike iji họrọ ike mbanye ebe ị na-ehichapụ gị faịlụ ike iṅomi ma ọ bụ pịa "iṅomi" ịchọ gị ehichapụ faịlụ.
Nzọụkwụ 3 Preview na naghachi faịlụ
Mgbe Doppler, tọrọ ntọala faịlụ ga-egosipụta. Ị nwere ike pịa ya ka ịhụchalụ faịlụ. Ọ bụrụ na ọ bụ onye ị chọrọ, pịa 'Naghachi' ịzọpụta ya na gị na Mac. Buru n'uche na adịghị ịzọpụta natara faịlụ na otu ebe ị furu efu ha, ma ọ bụ na mgbake nwere ike ada.
Recuva maka Mavericks: Best Recuva Alternative na Mavericks
Top 30 online music Player, adịghị agbaghara ya
> Resource> Top List> The 5 Kasị ewu ewu Ngwa ọcha Mac